♨ . Qu Te Kitchen: တော့ဂ် ပူဂီ
မင်္ဂလာပါရှင် ...တော့ဂ် ပူဂီ အချောင်းလေးတွေကို နေရာတော်တော်များများမှာတွေ့ရသလို ဘယ်လိုလုပ်လို့ ဘယ်လိုချက်စားကြတယ် ဆိုတာကို ချစ်သောဘလော့သူငယ်ချင်းအကိုအမတွေကို ပြောပြချင်လို့ အင်တာနက်က ရှာရတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ပြလိုက်ပါတယ် ..Qt ဟင်းအကုန်လုံးကို ဘယ်လိုချက်လဲ ဆိုတာ မသိပေးမယ့် တချို့ ဟင်းတွေကို ဘယ်လိုချက်လဲဆိုတာ နောက်များမှ အဆင်ပြေရင် သေချာအောင်ထပ်မေးပြီး တင်ပြပါမယ် နော်ဆန်စိမ်းများ
ပေါင်းမည့်လင်ဗန်းထဲကို ထည့်ပါတယ် ဗန်းတွေကို တလွှာပြီး တလွှာ ဆင့်ပီး အခုလို ရေနွေးငွေ့နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါတယ် ရေအေးထဲမှာ ခဏစိမ်ပါတယ်
ကြက်ဥ မုန်လာဥ ကြက်သွန်မြိတ် တော့ဂ်ပူဂီ ဟင်းချို တော့ဂ်ပူဂီ မီးကင် တော့ဂ်ပူဂီ ၀က်သားလိပ် တော့ဂ်ပူဂီ ငရုတ်သီးစိမ်း ၀က်သား ....တုတ်ထိုမီးကင် ငရုတ်နှစ်နှင့်ပြုတ်ထားသော တော့ဂ်ပူဂီ ငါးအသားပြားနှင့် တော့ဂ်ပူဂီ ကြက်ဥ ငါးအသား တော့ဂ်ပူဂီ ပန်းငရုတ် ကြက်သွန် တော့ဂ်ပူဂီ ...ငရုတ်နှစ်နှင့်အကြော်
ပဲပြား ဖက်ထုပ် မှို ကျူဆိုင် ငရုတ်သီးစိမ်း ကြက်သွန်မြိတ် ကြက်သွန်နီ နှင့် တော့ဂ်ပူဂီ ဟင်းချို
စပါကတ်တီနှင့် တော့ဂ်ပူဂီ တော့ဂ်ပူဂီကို နှမ်းဆီမွှေးနှင့် (တော့ဂ်ပူဂီ အရသာကစိမ့်ပြီး ၀ါးလိုက်ရင်သွားမကျိန်းပဲ တကျိကျိနဲ့ စိတ်တိုနေတုန်း ၀ါးရင်တော့ မြန်သလားမမေးနဲ့ :) ငရုတ်နှစ်နှင့် တော့ဂ်ပူဂီ ကို အိုးကပ်ကြော်
၀က်သား တော့ဂ်ပူဂီ ခေါက်ဆွဲ ငါးသားပြား(အိုထန်) နှင့် တော့ဂ်ပူဂီ အားလုံးကို အတိအကျဖော်ပြထားတယ်လို့ မပြောနိုင်ပေမယ့် အနီးစပ်ဆုံး မြင်ဖူး တွေ့ဖူးတာတွေ ပြောပြထားတာမို့ ကျန်နေခဲ့များ ရှိရင် နာလည်းခွင့်လွတ်ပေးပါ :) သူငယ်ချင်း ညီမ အမ များ ဘယ်ဟင်းကို အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ကြမလဲတော့ Qt လည်း မပြောတက်ဖူး အားလုံးလိုလိုက အရသာရှိပါတယ် ပထမဆုံး တော့ဂ်ပူဂီ ဟင်းချို . တော့ဂ်ပူဂီ အိုးကပ်ကြော် နဲ့ နောက်ဆုံး ခေါက်ဆွဲတော့ဂ်ပူဂီကိုတော့ Qt အကြိုက်ဆုံး ပါပဲ ရှင့် : ) ...
မီးမီးငယ်13 November 2011 08:40အခြောက်ကိုအခြမ်းလိုက်လှီးပြီး၊ဆိုင်မှာရောင်းတာတွေ့ တော့၊ရှမ်းခေါပုတ်နဲ့ တူလို့ ။ပြန်ပေါင်းပြီးကြံသကာရည်နဲ့ ၊တို့ စားဖို့ ကြံသေးတယ်။အော်...ဂလိုကိုး၊ခေါက်ဆွဲနဲ့ ဟာကိုစမ်းချက်မယ်။ချက်နည်းလေးတဆိတ်လောက်၊မမလှလှလေး...:))ReplyDeleteAH13 November 2011 11:42အားလုံးကတော့ စားချင်စရာတွေချည်းပဲဗျို့.... :)ReplyDeleteမြတ်ကြည်13 November 2011 13:26အားလုံးထဲမှာ တော့ပူကီကို ငါးအသားပြား ငရုတ်ဆော့နဲ့ စားရတာ၊ အကြိုက်ဆုံးပဲReplyDeleteIora13 November 2011 13:58တခါမှမစားဘူးဘူး။ ဆန်နဲ့ လုပ်ထားတယ်ဆုိုတော့ ညှပ်ခေါက်ဆွဲဖတ်လိုအရသာမျိုးလား၊ အထဲမှာကောအရသာပါသလားဟင်အိုင်အိုရာReplyDeleteQuTe13 November 2011 16:15မီးမီးငယ်လေး Ah မြတ်ကြည် Iora မီးမီးငယ်လေး ကိုယ်ဝချင် ၀ပါစေ ဘယ်လိုချက်လဲ ဆိုတာ မကြာမှီလာမည် ကွန်မန်းပေးသွားတဲ့ အေအိတ် ကျေးကျေး မြတ်ကြည် အကြိုက်ဆုံး တော့ဂ်ပူဂီ ကို ခေါက်ဆွဲနည်းနည်းထည့်စားကြည့် အရမ်းကောင်းတယ် သိလား..Iora တော့ဂ်ပူဂီ က ညပ်ခေါက်ဆွဲဖတ်လို အ၇သာ သိမ့်မဆင်ပါဖူး ကောင်ညှင်းခေါ်ပုတ် အရသာဆိုရင် နည်းနည်းဆင်တူမယ် ထင်ပါတယ် .. ဒီနိုင်ငံက ဆန်က အရမ်းစီးပါတယ် .မြန်မာဆန်မှုန့်နဲ့ ဆိုရင် သိမ့်အရသာမတူလောက်ဖူး ကောက်ညှင်းမှုန့်နဲ့လုပ်ရင် တော့တူမယ် ထင်ပါတယ်ReplyDeleteIora14 November 2011 03:39ကျေးဇူးပါ။ ခေါပုတ်နဲ့ တူတာကို ပိုသဘောကျတော့ ကြုံရင်ကုိုရီးယားဆုိုင်က၀ယ်စမ်းအုန်းမှဘဲ။း)ReplyDeleteချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)14 November 2011 21:02ကိုးရီးယားတွေ တော့ပူကီ အတော်စားပါလားနော်.. စိတ်ဝင်စားစရာဘဲမြန်မာပြည်မှာ ဒီလို လုပ်ရောင်းရင်ရော ရောင်းရမလား မသိဘူး..ဆိုင်ဖွင့်ချင်စိတ်ပေါက်လာပြီ..ReplyDeleteQuTe14 November 2011 23:29ဖွင့်ကြမယ်လေ .....တီချောက လှတော့ ကောင်တာထိုင် ......Qt က စာဖိုမှူးလုပ်မယ် ...........:PReplyDeleteAdd commentLoad more...
Korea vegetables noodle
Market-day and Qt (2)
ကျာကျန်မြောင် ( ပဲခေါက်ဆွဲ)
မုန်လာဥ ကင်းမ်ချီ -2
ကင်းမ်ချီနှပ်ချက် နှင့် ပဲပြား
ဂျပ်ချဲ - Jap Chae - (잡채)
Market-day and Qt
October 2011,korea top 10 song (1)
Aung Min Khant @ Shooting